Fanadihadiana ny voninahitra 7, ny hajan'i Honor | Androidsis
Honor dia nahavita nahazo sehatra teo amin'ny tsena noho ny sandany tsy mampino amin'ny volan'ny vokatra. Telefaonina toa ilay malaza Hajao 4X na ny Honor 6 Plus naneho fa tsy mila lafo ny terminal tsara kalitao. Ary ny Hajao 7 ohatra iray indray izao.
Nanaitra anay ilay mpanamboatra aziatika nandritra ny fampisehoana ny sainam-pirenena vaovao an'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fampisehoana fitaovana misy famaranana premium amin'ny vidiny mirary: 349 euro (vidio miaraka amin'ny antoka feno tsindrio eto). Ankehitriny, rehefa avy nanao ny Honor 7 famerenana Afaka manamafy izahay fa raha mitady avo lenta amin'ny vidiny mirary dia ny Honor 7 no vahaolana tsara indrindra.
1 Honor 7, famolavolana ary vita amin'ny haavo avo lenta
2 Sarimihetsika arakaraka ny famaranana nataonao
3 Kirin 935 sy 3 GB, mihoatra ny ampy hampihetsika milamina ny lalao rehetra
4 Fampisehoana miaraka amin'i Emui 3.1
5 Honor 7 dia nahavita nanararaotra ny ankamaroan'ny mety ho an'ny mpamaky ny rantsantanany
6 Fakan-tsary manome fakana sary manaitra
6.1 Gallery of sary namboarina niaraka tamin'ny Honor 7
7 Manomeza fahafaha-manao 7 sy vidiny
Honor 7, famolavolana ary vita amin'ny haavo avo lenta
Raha vao jerena, ny fitoviana mazava eo amin'ny Honor 7 sy ny Huawei Ascend Mate 7. Ireo fitaovana roa ireo dia mizara famolavolana sy kalitao mitovy tanteraka. Ary ny Honor 7 dia manana a vatana tsy mitovy vita amin'ny vy eo akaikin'ny fefy vita amin'ny aliminioma voadilo, manolotra famaranana kalitao.
Matanjaka ny fanamboarana ny fitaovana, voamarika amin'ny hatevin'ny telefaona, izay mahatratra 8.5 mm, zavatra be loatra ho an'ny mpampiasa sasany, bebe kokoa raha raisintsika izany ny Honor 7 dia matevina 2 milimetatra noho ny Huawei P8, na dia tsy nanelingelina ahy manokana aza izy io na inona na inona. Mariho fa ny sisiny somary boribory dia mamela ny Honor 7 hahazo aina kokoa hihazonana azy. Ankoatr'izay, ny fikasihana dia tena mahafinaritra, manadio kalitao amin'ny alàlan'ny mason-kodiny tsirairay.
Ny Honor 7 dia lehibe, ara-dalàna raha raisintsika ny refy: 143.2mm avo, 71.9mm lava ary 8.5mm ny sakany. Na eo aza ny habeny, maivana ny hajia vaovao Honor, 157 grama, manamora ny fanangonana azy na eo aza ny habeny.
Eo amin'ny sisiny ankavanan'ny fitaovana dia hitantsika ny bokotra fanaraha-maso ny feony sy ny herin'ny terminal, zavatra mahazatra amin'ny telefaona Huawei. Misongadina a fahamendrehana kely amin'ny bokotra herinaratra mba hanavahana azy amin'ny bokotra fanaraha-maso, antsipiriany iray hafa izay mampiseho ny asa lehibe nataon'ny ekipa mpamolavola Honor.
Ny iray amin'ireo teboka mahaliana indrindra dia ny amin'ny ilany havia. Ary izany ve ilay Honor 7 dia mampiditra bokotra ara-batana ahafahantsika manamboatra mba hidirana amin'ireo rindranasa samihafa sy ny fiasan'ny fitaovana Huawei. Izaho manokana dia namboariko ka, amin'ny alàlan'ny fihazonana ny bokotra, dia halefa ny jiro ary raha manindry azy indroa aho dia maka sary. Haingam-pandeha sy intuitive.
Eo ambonin'ity bokotra ity ihany no misy ilay lovia izay mahazaka azy karatra SIM nano roa, na SIM nano iray ary microSD iray. Hevitra tena tiako amin'ny Huawei P8 Lite ary nahavita nanararaotra tsara ny mpanamboatra.
Ary farany, eo amin'ny ilany ambany dia misy ny mpandahateny an'ny fitaovana, ankoatry ny mikrô sy ny micro USB. Ny fehin-kevitrao momba ny famolavolana ny Honor 7 dia izany ny mpanamboatra dia nanao asa tsy lavorary, manolotra vokatra misy kalitao tsy mampino na eo aza ny vidiny mirary.
Sarimihetsika arakaraka ny famaranana nataonao
Ny efijery dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny finday avo lenta ary manome ny Honor 7. Miaraka amin'ny diagonal an'ny 5.2 santimetatra, ny efijery Honor 7 dia mahatratra ny famahana ny HD (1920 x 1080 teboka) sy 424pp. Ny tontonana IPS dia manome mazava tsara sy maranitra sary.
Ny loko toa maranitra ary mijery zoro dia mihoatra ny marina. Ny efijery dia toa tsy misy tomika na dia amin'ny andro tena talaky masoandro aza, ka tsy misy azo kianina amin'izany.
Ankoatr'izay, Honor dia nahavita nanatsara ny efijery hatramin'ny farany, izay omandrakotra saika 73% ny eo alohan'ny fitaovana, misaotra ireo sisiny kely indrindra. Na dia efa nolazaiko taminao aza fa tsara ny loko atolotray ho default, azontsika atao ny manamboatra ny hafanin'izy ireo, zavatra mahazatra amin'ny findain'ny mpanamboatra aziatika.
Farany mariho fa ny efijery an'ny Honor 7 azo ampavitrika sy hakatona amin'ny paompy indroa izy io, toa ny fomban'ny KnockOn an'ny LG. Raha izaho manokana dia tsy tiako ity safidy ity satria indraindray aho mamaha tampoka ny efijery ao am-paosiko, saingy tsotra toy ny tsy mampihetsika io asa io raha sendra anao toa ahy sy namaha ny olana.
Kirin 935 sy 3 GB, mihoatra ny ampy hampihetsika milamina ny lalao rehetra
Toy ny mahazatra dia miverina miloka amin'ny vahaolana manokana azy ireo ny mpanamboatra hamelezana ny Honor 7. Amin'izany fomba izany no ahitantsika ilay processeur mahery HiSilicon Kirin 935, SoC valo fotony miorina amin'ny core 53 GHz Cortex-A1.5 ary cores Cortex-A53 efatra hafa izay mahatratra ny hafainganan'ny famantaranandro 2.2 GHz. Fandaminana solvent ho an'ny telefaona avo lenta ihany.
Su Mali T-628MP4 GPU hamela anao hifindra amin'izay ny lalao na ny fampiharana. Na dia marina aza fa ambany noho ilay ampiasain'ny Samsung Galaxy S5 ity singa fanodinana sary ity, dia nilalao lalao samihafa izahay izay mitaky fitaovana mahery vaika hiasa ary ny Honor 7 dia nanao tsara tokoa, mamela antsika hankafy lalao tsy misy mahasosotra jerk na lag.
Ny antsipiriany iray izay tena tiako dia ny zava-misy, na inona na inona fahasarotantsika manome ilay fitaovana, Honor 7 dia tsy mihoampampana, tsy toy ny tampon'ny ambaratonga hafa, toy ny Samsung Galaxy S6, izay mijaly amin'ity olana ity rehefa mijery atiny multimedia na mankafy lalao video.
Misy configurations roa ho an'ny Honor 7: kinova misy RAM 3 GB sy fitehirizana 16 GB ary maodely hafa misy RAM 3 GB sy 64 GB ny fahatsiarovana anatiny, na dia any Espana aza ny maodely 16 GB ihany no misy. Ny singa izay nosedraina, ilay 16 GB, dia somary latsaka kely ihany, na dia noho ny slot misy ny karatra SD aza dia voavaha ny olako tamin'ny fametrahana karatra 64 GB.
Ny orinasa Huawei dia miloka amin'ny a Bateria 3.100 mAh hanohanana ny lanjan'ireo fitaovan'ny sahaninao vaovao. Efa zatra ny fitaovana Honor isika gaga ny fizakan-tenany, ary ny Honor 7 dia tsy hihena.
Fampiasana azy io amin'ny fampiasana mahazatra nitazona ahy nandritra ny iray andro sy sasany ny terminal, mahatratra bateria 4%, fahaleovan-tena tena tsara raha raisintsika ho tombony ny tombony azony. Ny fampiasana azy amin'ny fomba mavesatra kokoa, milalao lalao ary mijery horonantsary, ny terminal dia niaritra iray andro. Ho fanampin'izany, ny rafi-pandehanany haingana dia mamela antsika hanana ny Honor 7 feno vola ao anatin'ny adiny iray mahery.
Ny hany nefa hitako dia ilay mpandahateny Honor 7. Ny kalitaon'ny feo dia normal ary ny toe-javatra misy azy dia mahatonga antsika indraindray mampiditra ny output audio rehefa mandray ny terminal. Ary farany, tsarovy fa ny Honor 7 dia manana fanohanan'ny 4G an'ny tarika Espaniôla ka tsy hisy olana raha ny mankafy ny fifandraisana LTE eto amintsika.
Fampisehoana miaraka amin'i Emui 3.1
Tsy tiako manokana ny sosona EMUI 3.1 manokana. Tsy dia tiako loatra ny sosona manokana, fa ity iray manokana indrindra toa manalefaka ny tobin'ny orinasa. Soa ihany fa tsy eo amin'ny Honor 7 ity olana ity.
Ilay fitaovana miasa tena milamina, mamela ny hifindra eo anelanelan'ny fampiharana tsy misy olana. Ny hany saingy ilay safidy multitasking izay manery anao handeha amin'ny windows hafa mandra-pahitanao ny rindranasa tianao hampiasaina. Haingam-pandeha kokoa ny mahita ilay rindranasa amin'ireo birao birao isan-karazany noho ny manokatra ny safidy multitasking.
Na dia mihazakazaka Android 7 Lollipop aza ny Honor 5.0 dia antenaina fa ao Ny volana febambra dia tonga ny fanavaozana ny kinova farany an'ny rafitra fiasan'i Google, Android 6.0. Manantena aho fa tsy mangataka izy ireo, satria rehefa afaka mametraka ny rindranasa rehetra amin'ny micro SD ny Honor 7
Honor 7 dia nahavita nanararaotra ny ankamaroan'ny mety ho an'ny mpamaky ny rantsantanany
Ny lamaody biometrika dia nanjary lamaody. Mihabetsaka ny mpanamboatra manolotra an'ity karazana vahaolana ity ary ny Honor kosa tsy ho latsa-danja. Ahoana ny fomba fiasan'ny mpamaky rantsantanana Honor 7? toy ny landy.
Tsotra dia tsotra ny fanaingoana, mila manaraka fotsiny ny tutorial izahay mba hamboarantsika ny dian-tananay mba hanombohana hampiasa ny sensor fantsom-panajana Honor 7 izay manaiky ny mpampiasa haingana kokoa noho ny Samsung Galaxy S6, noho io 360º sensor biometrika.
Ny antsipiriany iray tena tiako dia ny mpamaky ny rantsantanana Honor 7 tsy vitan'ny hoe mamaha ny efijery; koa Afaka manaiky antso isika, maka sary sy horonan-tsary, mamono ny fanairana na mijery ny tontonana fampandrenesana amin'ny alàlan'ny fanaovana fihetsika tsotra amin'ny rantsan-tànana amin'ny mpamaky.Ohatra, tsy mila mitazona ny rantsan-tànana fotsiny isika eo amin'ilay mpamaky ny dian-tànana mba hampavitrika ny fakantsary. Safidy hitako fa tena ilaina ary mampitombo ny fahafaha-manamboatra sensor biometrika ity.
Tsotra sy intuitive ny rafitra. Indraindray rehefa mitondra azy ao am-paosinao ny lahasa sasany dia ahetsika tsy fanahy iniana fa azonao atao foana ny mamono io safidy io ary mampiasa ny sensor amin'ny dian-tànana fotsiny mba hamaha ny terminal.
Fakan-tsary manome fakana sary manaitra
Ny Honor dia mirona amin'ny filokana amin'ny fanolorana lantihy avo lenta ary santionany amin'izany ny Honor 7. Ny fakantsary lehibe amin'ny telefaona dia misy solomaso Sony IMX230, sensor 20 megapixel miaraka amin'ny flash LED roa izay manome fampisehoana tena tsara.
Ho fanampin'ny fakantsary Honor 7, fonosana kristaly safira hialana amin'ny ratra dia mampiditra rafitra iray izay manasaraka ny jiro miditra ho sary roa misaraka ary mampitaha azy ireo, mamela ny fifantohana haingana. Misy karazany maro ny safidy, afaka maka sary panoramic, mampihetsika ny HDR mode, mode burst, apetaho amina sary ny horonan-tsary mihetsika miadana ...
Efa nanao fanandramana maromaro tamin'ny fomba maody izahay ary ny marina dia izany ny valin'ny fisamborana dia tsara, manolotra sary tsara kalitao. Na dia marina aza fa tsy eo amin'ny ambaratonga hafa ambonimbony hafa izy ireo, ny valin'ny fakana sary dia mihoatra ny ampy ho an'ny mpampiasa rehetra.
Gallery of sary namboarina niaraka tamin'ny Honor 7
Ary tsy afaka manadino azy isika Fakan-tsary eo anoloana 8 megapixel, mihoatra ny ampy ho an'ny selfie kalitao na antso an-tsary. Raha ampiantsika ity Tselatra LED frontal izay ahafahantsika maka sary amin'ny tontolo maivana ary azontsika atao ny manamarina ny asa lehibe nataon'ny Honor momba an'io.
Manomeza fahafaha-manao 7 sy vidiny
Ny voninahitra 7 Efa amidy amin'ny vidiny 349 euro. Raha misoratra anarana ao amin'ny magazay amin'ny mpanamboatra an-tserasera iHahazo fihenam-bidy mahaliana manodidina ny 50 euro ianao.
Ny fehin-kevitro taorian'ny nanandramako ny Honor 7 nandritra ny tapa-bolana dia terminal tsara izy io, miaraka amin'ny famaranana izay tsy misy mahasaro-piaro ireo mpifaninana aminy sy vidiny tsy azo resena. Bebe kokoa raha raisintsika fa manana fiantohana maharitra roa taona ao amin'ny firenentsika.
Ny kalitaon'ny famaranana dia miankina amin'ny tampon'ny tandavan rehetra
Miasa tanteraka ny sensor sensor
Ny bokotra ara-batana azo ovaina dia manatsara ny traikefan'ny mpampiasa
Ny kalitaon'ny feo dia tsy ny tsara indrindra ary indraindray azonao atao ny manarona ny vokatry ny mpandahateny
Ny fitehirizana 16 GB dia ara-drariny, na dia tsara vintana aza izy io amin'ny alàlan'ny slot misy ny karatra micro SD
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Honor 7, manadihady ny telefaona antonony tsara indrindra izahay - avo latsaka ny 400 euro
Saingy somary tara ihany ity lahatsoratra ity. Manana ny Honor 7 aho nanomboka ny septambra 2015 ...
Antonio | tafo finday dia hoy izy:
Fiasa tena tsara ho an'ny vidiny mirary, fomban'ny Sony ho an'ny interface. Sady tsy vidiny mora izany fa mitondra saika izay rehetra azo angatahina amin'ny finday. Mendrika hodinihina, manontany tena aho hoe ahoana ny fandehany eo amin'ny sehatry ny fahamendrehana?
Valiny tamin'i Antonio | tafo finday
Ao amin'ny vmall, izay tranonkala ofisialin'i Eropa, dia eo amin'ny 300 €. Miombon-kevitra amin'ny draper aho. Tamin'ity indray mitoraka ity dia antsasaky ny taona no teny an-tsena, saingy lehibe ny marina. ny ratsy fotsiny dia tsy mitondra nfc
Google Docs dia mahazo fahaizana manampy fanehoan-kevitra amin'ny fomba mora
LG dia nanambara ny famoahana ny K4 sy K8 manerantany